I-townhouse evuselelwe ngothando - I-Airbnb
I-townhouse evuselelwe ngothando
Neufelden, Oberösterreich, i-Austria
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Gerald
U-Gerald Ungumbungazi ovelele
Indlu yedolobha evuselelwe ngothando, esohlwini lwemakethe engokomlando i-Neufelden eMühlviertel iyindawo ekahle yabo bonke abathanda i-ambience yezindlu ezindala. Naphezu kwendawo emaphakathi, amakamelo okuhlala athule ngokuphelele. Eduze kwalapho kukhona ikhefi/ibhikawozi, izihambi kanye nesitolo segrosa. Indawo yokudlela ewine imiklomelo i-Mühltalhof & Fernruf 7, kanye nesiteshi i-Neufelden kungakapheli imizuzu embalwa yebanga lokuhamba.
Unethuba eliyingqayizivele lokuchitha isikhathi kule ndlu yedolobha lendabuko. Ilungiswe ngokukhulu ukucophelela nokunaka imininingwane futhi inikeza indawo yokuhlala yesimanje emakamelweni anomlando.
Iholide kude nengoma eshaywayo. Ukuhamba ngezinyawo eduze kwemifula efuna indlela yakho ukusuka eHlathini lase-Bohemian ukunqamula i-Mühlviertel Granite eqinile ukuya eSigodini esizolile sase-Danube. Inethiwekhi ye-trail yebhayisikili yezintaba ubude be-950 km. Izinsuku ezimbalwa pilgrimage endleleni granite. Ubuciko, isiko kanye nobukhazikhazi basemadolobheni edolobheni laseLinz noma ohambweni oluya eCesky Krumlov noma ePassau.
UGerald Ungumbungazi ovelele
Ngena: 12:00 - 02:00
Hlola ezinye izinketho ezise- Neufelden namaphethelo